महिला हिंसा विरुद्धको अभियान र बढ्दो महिला हिंसा
१७९७ पटक पढिएको
यतिबेला महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । यो अभियान चलेको अहिले मात्रै होइन । सन् १९९४ देखि महिला हिंसाविरोधी अभियान सञ्चालन हँुदै आएको छ ।
हामीले लामो समयदेखि हिंसाका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएका छौँ । तर, महिला हिंसालाई रोक्ने भनेर गरेका सबै प्रयास मरुभूमिमा पानी खन्याए जत्तिकै भएको छ । दक्षिण एसियाका केही यस्ता मुलुक छन् जहाँ महिला हिंसाले छपक्कै ढाकेको छ ।
कुनै विषयको थालनी र अन्त्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको निधो त्यहाँ काम गर्ने पात्र र त्यहाँको वातावरणले निधो गर्छ । हाम्रो विचारलाई कत्तिको फराकिलो र कामयावी बनाउँछौँ, त्यसको निधो पनि वरपरको वातावरणले गर्छ । हामी जति राम्रा योजना बनाएर सबैतिरबाट वातावरण सुधारको काम गर्न सक्छौँ त्यति नै धेरै महिला पनि सुरक्षित हुन सक्छन् ।
अहिले महिला हिंसाका कुरा गर्दा पहिले त आफ्नो देशको अवस्था के छ ? त्यो हेर्ने हो तर त्यसलाई प्रभाव पार्ने अरु पनि धेरै कुरा छन् । त्यसमध्येको सबैभन्दा प्रमुख कुरा हाम्रा छिमेकी मुलुक पनि हुन् । हामीले महिला हिंसाको बारेमा हेर्दा छिमेकीलाई हेर्नै पर्छ । छिमेकी मुलुक भारत जहाँ सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा हुने गर्छ । त्यहाँको प्रमुख कुरा भनेको दाइजो प्रथा हो ।
त्यहाँ अहिले पनि दाइजोका कारण कुटाइ खाने, मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाउने, कुटपिट गर्ने घरबाट निकालिदिने चलन धेरै छ । त्यस्तै पाकिस्तानका कतिपय ठाउँमा प्रेमजोडी मारिएका थुप्रै घटना छन् । बङ्गलादेशमा पनि त्यस्तै छ । यी हाम्रा वरपका देश जहाँ महिला हिंसा अत्यधिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्क छ ।
हाम्रो छिमेकी देश भारतमा बोक्सीको आरोपमा पिट्ने र गाउँ निकाला गर्ने गरिन्छ । अझै सबैभन्दा डरलाग्दो गरी सञ्चालन गरिएका कोठीहरू भारतका प्रत्येक शहरमा पाइन्छ । त्यहाँ जसरीे गाईवस्तुको मोलमोलाइ गरेर किनबेच गरिन्छ । त्यसैगरी महिलाहरूलाई पनि मोलमोलाइ गरेर किनबेच गरिन्छ ।
नेपालमा महिला हिंसा बढ्नुमा भारतीय हिंसाको प्रभाव पर्नु नौलो होइन । छिमेकी मुलुकको प्रभाव हाम्रो देशमा थुप्रै पर्ने गर्छ । त्यसैले पनि हामीले महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ । नेपालका कुनाकाप्चाका चेलीहरूलाई नेपालीहरूले नै विवाह गर्ने बहाना बनाएर वा काम लगाइदिने बहानामा फकाएर भारतीय कोठीमा लगेर बेचेका घटना हामी दिनैपिच्छे सुनिरहन्छौँ ।
हाम्रा छिमेकी छोरीचेलीहरू बेचिएका र कोठीमा नारकीय जीवन बिताइरहेका थुप्रै घटना छन् । केही महिना अघि एक जना वडाध्यक्ष आफँैले भारतमा कोठी सञ्चालन गरेको र नेपालबाट किशोरीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी लाने गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
नेपाली चेली नेपालकै दलालहरूबाट काम लगाइदिने आशमा खाडी मुलुकमा बेचिने गरेका घटना पनि मिडियामा आउने गरेका छन् । कति चेलीहरू त्यहाँ बलात्कारको सिकार भएर गर्भवती भई अलपत्र भएका, कतिले कुटाइ खाएर अङ्गभङ्ग भएका, कतिलाई काम गर्ने घरको हजुरबुबादेखि नातिसम्मले बलात्कार गरेका घटना बाहिर आइरहेका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतको प्रभावमा परेका घटनाहरू भनेको चेली बेचिनु, तराई भागमा सबैभन्दा धेरै दाइजो प्रथा कायम रहनु, दाइजोको निहुँमा महिलाले यातना सहनु यस्ता उदाहरण हुन् । दाइजो नल्याएको निहुँमा महिलामाथि हुने हिंसा महिला हिंसाको पराकाष्टाको नमूना हो । यो हामीले छिमेकीबाट पाएको उपहारजत्तिकै भएको छ ।
बोक्सीका नाममा कुटपिट गर्ने अनि मानिसकै मलमूत्र खुवाउने कुरीति पनि छिमेकीको प्रभावले तराई भेगमा बढेको हो । बोक्सी भनी महिलालाई मात्रै औंल्याइन्छ । पुरुषलाई धामी भनिन्छ, बोक्सी हुँदैन । यो ठूलो सामाजिक विभेद हो ।
अब यहाँ मैले दाइजोका बारेमा केही उदाहरण दिन चाहन्छु । म एक पटक जनकपुर गएको थिएँ । त्यहाँ एक जना मजदुर नेताको घरमा बसेँ । उनले आफ्नो छोरालाई चिनाउँदै भने, ‘यो मेरो जेठो छोरो । यसले हेल्थ असिस्टेन पास गरेको छ । अब यसको विवाह गरिदिन्छु ।’
मैले केटी कहाँ हेर्नु भएको छ भनेँ ? उनले एउटी केटीको कुरा नेपालबाट आएको छ । उसले दाइजो थोरै दिन्छ । अर्काे चाहिँ भारतबाट आएको छ । केटाको पढाइ खर्च दिएर सुन ५ तोला दिनुप¥योे नि भनेका थिए । दिएन भने के गर्नुुहुन्छ भन्दा उनले सजिलै भने, ‘त्यो केटी फिर्ता गरिदिन्छु ।’
मैले भनेँ, ‘तपाईले यस्तो गर्न सुहाउँछ ?’ जवाफमा उनले भने, ‘मेरी छोरी भए मैले जसरी पनि दिनुपर्ने हुन्छ । अनि मैले किन नलिने ? यहाँ सबैले लिन्छन् ।’ यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्ता थुप्रै घटना छन् ।
महिला हिंसाका प्रकृति
अहिले हाम्रो देशबाट सबैभन्दा खतरनाक महिला हिंसा हुने भनेको कोठीमा लगेर बेच्नु, दोस्रो खतरनाका दाइजोको विषयमा यातना दिनु र खतरनाक भनेको बोक्सीका नाममा दिइने यातना हुन् । बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटना पनि बढिरहेका छन् । अहिले त झन फेसबुक मार्फत नाना थरि भन्ने र जिस्क्याउने गरिन्छ । यी सबै महिला हिंसाका रूप हुन् ।
एक दिन म विष्णुसँग विराटनगरबाट धरानतिर आउदैँ थिएँ । बसमा मानिस खचाखच थिए । हामी उभिएको भन्दा एक सिट अगाडि एक जना महिला बसेकी थिइन् । तिनको सिटमा टाँसिएर कपडा पालेो एउटा मानिस छेउमा उभिएको थियो । त्यसका हात बिस्तारै ति महिलाको छातीतिर बढाउँदै थियो । महिलाले अप्ठ्यारो मानेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । त्यसले एकछिनमा तिनको संवेदनशील अङ्गमा हात पु¥यायो । महिला कराउँदै ‘ए गुण्डा तैंले यो के गरेको’ भनिन् । तपाईहरूले यो के हेरेर बस्नु भएको भनेर बसका यात्रुलाई भनिन् ।
त्यसले अझै अश्लील गाली गर्न थाल्यो । त्यो सुनेपछि मैले ‘ए भाइ तिमीले यी आमाजस्ती मान्छेलाई के भनेको ? ए गुरुजी गाडी थानामा लैजानुहोस् भनेँ ।’ गाडीका मानिस सबै चुप लागे । मैले यति भनेपछि त्यो केटो अगाडि स¥यो । अरु कोही बोलेनन् । महिलाले आँखाभरी आँशु पारेर मलाई धन्यवाद भनिन् । ड्राइभरले थानामा गाडी लान मानेन ।
इटहरी आएपछि त्यो अघिको केटाले मलाई ‘अङ्कल एकछिन आउनु न ओर्लिने होइन’ भन्यो । तिनीहरू ४÷५ जना रहेछन् । मलाई कुट्ने योजना बनाएछन् । विष्णुले थाहा पाएर मलाई ओर्लिन दिइनन् । उनले चिनेको ड्राइभर भएकाले गाडी हाँक्न भनिन् । उनले ढोकामा बसेर तिनलाई रोकिन् । पछि हामी थानामा गयौँ । तर त्यसको कुनै परिणाम निस्किएन । ती केटाहरू बेपत्ता भइसकेछन् । गाडीमा यसरी महिलामाथि दुव्र्यहार हुन्छ । तर धेरै महिलाले त्यसलाई पचाउँछन् ।
कारखानामा आफूसँगै काम गर्ने साथीहरूबाट दुव्र्यवहार हुने गर्छ । कतिय व्यवस्थापकले पनि महिलामाथि दुव्र्यहार गर्छन् । यस्ता घटना थुप्रै छन् । यसलाई कार्यथलोको दुव्र्यवहार भनिन्छ । बजारमा पनि भीडभाडमा पसेर महिलामाथि दुव्र्यवहार गरिन्छ । सिनेमा हलमा महिलामाथि दुव्र्यवहार हुने गर्छ । विद्यालयमा पनि दुव्र्यवहार हुने गर्छ । एकान्त ठाउँमा घाँस काट्न जाँदा, पानी भर्न जाँदासमेत महिला माथि दुव्र्यवहार हुने गर्छ ।
समाज अपराधउन्मुख हुँदै
समाजमा अपराधीकरण हुँदै छ । समाजका कति मानिसलाई समाजको सदस्य मान्न नसकिने गरी विकृत भएका छन् । केही मानिस लागू औषध खाने, घरपरिवार कसैलाई पनि नटेर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । फेसबुकले झन् धरै विकृति ल्याएको छ । डिप्रेसन, समाजसँग र परिवारसँगको सम्बन्ध विच्छेद जस्ता असामाजिक गतिविधिले र परिवारको माया नपाएका महिलाले महिला हिंसामा बढोत्तरी गरेको छ ।
महिलामाथि हुने उत्पीडन र हिंसा भएका घटना मध्ये धेरै ठाउँमा मादक पदार्थ सेवन पनि कारकको रुपमा रहेको पाइन्छ । महिलाले आफूले आफैंलाई र समाजले अबला ठान्नाले पनि महिला हिंसा बढेको पाइन्छ ।
महिला हिंसाविरोधी अभियान
अहिले सबैभन्दा धेरै गैरसरकारी संस्थाले महिला हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । तर ती कार्यक्रम महिला हिंसा रोक्ने क्रममा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । स्थानीय पालिकामा योजना पेश गरी होटल तथा रिसोर्टमा त्यस्ता कार्यक्रम हुने गरेका छन् । स्थानीय तहको बजेट लगी ब्यानर र कार्यपत्र बनायो अनि समाजका अलिअलि बुझेका महिलालाई जम्मा पारी कार्यपत्र सुनायो । एक दुई जनाले त्यो कार्यपत्रमाथि टिप्पणी ग¥यो । खाजा खायो, प्रतिवेदन दियो त्यतिमै सकिन्छ कार्यक्रम । यसले महिला हिंसा रोक्ने काममा सिन्का पनि भाँचेको पाइँदैन । अहिले पनि हिंसा बढी हुने क्षेत्रमा त्यस्ता संस्था जाने प्रयास गर्दैनन् ।
यसलाई रोक्न महिला हिंसा बढी हुने गरिब बस्तीहरू, तराईको दलित बस्ती, सम्भ्रान्त परिवार, विद्यालय, सार्वजनिक सवारी, कारखाना, होटल, रेष्टुरा, सार्वजनिक स्थलमा सचेतना अभियान चलाउनुपर्छ । मदिरा बिक्री र सेवन गर्ने निश्चित स्थान तोक्नुपर्छ । दुव्र्यसनमा फसेकाका लागि सुधार गृह खोल्नु जरुरी देखिन्छ । मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य गरी अवैध कोठी बन्द गर्नुपर्छ । बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाई कुटपिट गर्नेलाई व्यक्तिहत्या बराबरको कानुनी सजाय दिनुपर्छ । सबै विद्यालयमा हप्तामा कम्तीमा ३ वटा घण्टीमा यस सम्बन्धी सचेतना अभियान चलाउनुपर्छ । आजकाल सबै गाडीमा भिडियो स्क्रिन हुन्छ । त्यहाँ प्रत्येक आधा घण्टामा महिला हिंसाविरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सिनेमा हलमा सिनेमा शुरु हुनुपूर्व, मध्यान्तर र अन्त्यमा महिला हिंसाविरोधी दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्नुपर्छ । रेडियो र पत्रिकामा पनि अनिवार्य रूपमा स्तम्भ राख्नुपर्छ । प्रत्येक कारखानामा पनि काममा पस्नु अघि, मध्याह्न्नमा र अन्त्यमा महिला हिंसा विरोधी दृश्य देखाइनुपर्छ । हवाजहाजमा प्रत्येक दुई देशको सिमानामा महिला किशोरी बेचिँदै त छैनौँ भन्ने दृश्यसामग्री राख्नुपर्छ । यो गरेमा मात्रै बिस्तारै महिला हिंसामा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि नागरिक र राज्य पनि त्यत्तिकै सचेत हुनुपर्छ ।